यसरी सुल्झियो सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद « Postpati – News For All
यसरी सुल्झियो सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद
फागुन १७, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाममा गरिएको सिफारिसका विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सिर्जना भएको आन्तरिक द्वन्द्व सुल्झिएको छ ।
पार्टीको सिफारिसअनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने र अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनेगरी सहमति खोजिएको हो ।
यसअघि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने पार्टीको सिफारिस आफूलाई अमान्य हुने प्रधनमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएपछि विवाद चुलिएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपाय सुझाएपछि उनकै पहलमा पार्टीको विवाद साम्य भएको हो ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा गत बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सो निर्णय अमान्य हुने प्रतिक्रिया वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिएका थिए ।
त्यसपछि समस्या हलका लागि नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार साँझ र बिहीबार छलफल गरेका छन् । दुवै दिन उनले गरेको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । नेता नेपालले खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा आगामी ६ महिना राख्न सक्ने उपाय सुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उपाध्यक्ष गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सहमत भएका हुन् ।
पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न आफूले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सूचना पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत ओलीले शुक्रबार बिहान गौतमसम्म पु¥याएका थिए ।
त्यससँगै पार्टी अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालसँगै झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा पार्टीका उपाध्यक्ष गौतम नै मनोनीत हुने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा म कल्पनासम्म पनि गर्दिनँ, उहाँले गर्नुहुन्छ,’ प्रचण्डले भने ।
उनले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा आफू निर्धक्क भएको बताए । शुक्रबार बिहान चितवन पुगेका प्रचण्डले दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा भएको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
‘मलाई विश्वास छ, उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले पार्टीको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नुहुने छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पार्टीभित्र केही सामान्य विषयमा बहस हुनुले पार्टीलाई सधै सक्रिय बनाउने भएकाले अहिलेको बहसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु ।’
संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने उपाध्यक्ष गौतमको सर्त भने बुधबारको सचिवालय बैठकबाट बहसबाहिर पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
उनले संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताउँदै आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने जानकारी दिए । उपाध्यक्ष गौतम सिफारिसका लागि व्यवसायीसँग बैठक बसेको भन्ने भनाइ कपोलकल्पित मात्र भएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘त्यो नियोजित, भ्रामक र कपोकलल्पित छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन् । सोहीअनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आगामी ६ महिनासम्मका लागि खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैंसेपाटी पुगेका महासचिव पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई नै सिफारिस गर्ने बताएका हुन् ।
अस्वस्थ भएपछि गौतम घरमा नै आराम गरिरहेका छन् । उनलाई भेट्न पुगेका महासचिव पौडेलले पार्टीको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री तयार भएको र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै दोहो¥याउन चाहेको विषय जानकारी गराएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा पार्टी निर्णयमा मान्न आफू तयार भएको प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई बताएका थिए । उनले संविधान संशोधनको विषयलाई भने गम्भीर रूपमा लिइएको प्रतिक्रिया दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा ६ महिनाका लागि खतिवडालाई निरन्तरता दिए पनि उनलाई सोहीबीचको समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव पठाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या नौ पु¥याउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल थालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या थप गर्नेगरी संविधान संशोधन भएमा पुनः ६ जना थप हुनेछन् । हाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या तीन रहेको छ । यो खबर सविन शर्माले राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।